Ezona zicelo zilungileyo zokucinezela kunye nokudibanisa iifayile kwi Android | I-Androidsis
Kuqhelekile ukuba yonke imihla sifumana enye ifayile okanye ifolda yeefayile ezixineneyo kwi-zip, rar, 7z, tar okanye naluphi na olunye uhlobo kuba yile ndlela kuthatha indawo encinci kwaye kulula, kwaye ngaphezulu kwako konke, ngokukhawuleza, ukuze ukwazi ukuthumela nokubamkela, umzekelo, nge-imeyile. Ke, ukuba nesicelo esilungileyo esivumela lawula ezi ntlobo zoovimba kwindawo enye Kusisiseko.
Ukuba ungomnye wabo kufuneka balawule iifayile ezixineneyo kwi-zip, nika okanye naluphi na uhlobo, apha ngezantsi sikubonisa ukhetho kunye ezonaapps zilungileyo zokuziphu kunye nokuvula iziphu iifayile kwindawo enye. Kodwa kuthiwani ngokuyeka incoko kwaye siqale?
1 Lawula .zip, .rar kunye nezinye iifayile ngezi zicelo ze-Android
1.1 B1 Uvimba
1.3 Umphathi Wefayile yeAndroZip (Umphathi Wefayile ye-ZIP)
Lawula .zip, .rar kunye nezinye iifayile ngezi zicelo ze-Android
Izicelo esiza kuzibona apha ngezantsi zikhethekile kulawulo lweefayile ezixineneyo, eziza kukuvumela ukuba ubenendawo esembindini kwisixhobo sakho se-Android onokuthi wenze kulo msebenzi.
I-B1 Archiver sisixhobo esithandwayo onokuthi ucinezele kuso kwaye udibanise iintlobo ezahlukeneyo zeefayile. Inenkxaso yeefomathi ezisetyenziswa kakhulu ezinje nge-zip kunye rar, kodwa kunjalo iyahambelana namafomathi angama-37 ewonke, ke ukuba ngenye imini bayakuthumela ifayile kwifomathi ongasoloko uyisebenzisa, eyona nto ikhuselekileyo kukuba i-B1 Archiver iyakuyiphatha ngaphandle kwengxaki.
Inayo uyilo oluhle nolusebenziseka lula kwaye isimahla, nangona ufuna ukulahla iintengiso kwaye unezinye izinto ezongezelelweyo kuya kufuneka uhlawule i-1,99 ye- €.
Ikhonkco lokukhuphela ngqo kwiVenkile yokudlala.
I-ZArchiver sisixhobo esimahla simahla ebesikwi-Android iminyaka eliqela ngoku, sinikezela ngamava omsebenzisi aqinisekileyo, alula kwaye agile. Unika inkxaso kwiindidi ezininzi zeefayile kwaye kubandakanya ukhetho lokubethela, ukukhuselwa kwephasiwedi ...
Ikhonkco lokukhuphela ngqo kwiVenkile yokudlala
Umphathi Wefayile yeAndroZip (Umphathi Wefayile ye-ZIP)
UAndroZip uyi isixhobo sasimahla ebanga ukuba iyahambelana neentlobo zeefayile ezinje nge-zip, rar, tar, gzip, kunye ne-bzip2 phakathi kwabanye. Kanjalo kubandakanya umphathi wefayile izakuluncedo kakhulu xa ufuna ukushenxisa iifayile kwezinye indawo kwisixhobo sakho okanye uzithumele.
Umphathi weFayile yeAndroZip uyakunceda ukope, ucime, ushukumise, ucofe, udibanise, ukhangele kwaye uququzelele iifayile zakho, umculo, imifanekiso kunye neefolda ngendlela obuya kwenza ngayo kwiPC yakho. Kwakhona, ilungiselelwe iifowuni kunye neepilisi.
Ikwavumela ukuba uguqule iifayile ze-ZIP ezifihliweyo (imigangatho, ii-AES 128 kunye nama-256 bits) kunye nokubethela kunye nokuqwalasela amaphasiwedi kwiifayile zakho ze-ZIP.
Ndiqinisekile ukuba uninzi lwenu luyasikhumbula isicelo Winzip leyo, ewe, ikwafikelele kwizixhobo ze-Android. Emva kwayo ngamava amade kakhulu kwinguqulelo yedesktop yayo, ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba njalo enye yeekhomputha kunye ne-decompressors yeefayile ze-Android esiza kuthi singene kuzo.
Yintoni eyenza yahluke kukuba ukongeza inikeza inkxaso kwiDropbox kunye neGoogle Drayivu, Into esele iqalile ukulingiswa ngabanye ngenxa yokusebenziseka kwayo.
Su uyilo lwanamhlanje yenye amandla ayo.
Kule meko, abakhange bazenze nzima iingqondo zabo xa bekhetha ihlelo, ke oko kushiya kungathandabuzeki ukuba yeyantoni le app. RAR "yi Inkqubo yokucinezela inye yoqobo, yasimahla, elula, elula kwaye ekhawulezayo, umncedisi, umkhuphi, umphathi kunye nomhloli wefayile osisiseko
RAR Iyakwazi ukucofa iifayile kwiifom ze-RAR kunye ne-ZIP, kodwa ikwahlulahlula i-RAR, i-ZIP, i-TAR, i-GZ, i-BZ2, i-XZ, i-7z, iifayile ze-ISO kunye ne-ARJ.
Iimpawu ezongezelelekileyo zibandakanya "ukulungiswa kwezinto ezonakeleyo ze-ZIP kunye ne-RAR, i-RARLAB WinRAR ehambelana nokuvavanywa kwesantya, ilog yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ivolumu yesiqhelo kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukubethela, ugcino lomeleleyo, ukusetyenziswa kwee-CPU ezininzi zokucinezelela idatha.»
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zicelo zilungileyo zokucinezela kunye nokudibanisa iifayile kwi-Android
I-iPhone 7 Plus vs LG G6, duel yesikrini